CSR - Elite Petrochemical
Our belief in Corporate Social Responsibility (CSR) is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.
We will stand asaresponsible and dignified business organization. And hence, we are going to achieve both periodical business goals and the positive outcomes of our CSR activities shaped by the three goals of SDGs, simultaneously.
We strictly commit to making sure that our yearly CSR programs and activities will be implemented by focusing on these three key result areas of SDGs -
လူမှုတာဝန်သိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မူဝါဒ
ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်သိ၍ သိက္ခာရှိသော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်ပါမည်။
ထိုသို့ ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် စီးပွားရေး အမြတ်အစွန်းများရရှိရန် ကြိုးစားမှုနှင့် တပြိုင်တည်း နှီးနွယ် သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးမှ ချမှတ်သော ဟန်ချက်ညီ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရည်မှန်းချက် (၁၇) ရပ် အနက်မှ (၃)ရပ်ကို ရွေးချယ် ဦးတည်လျက် ရလာဒ်ကောင်းများ ခံစားနိုင်ကြစေရေးအတွက် နှစ်စဥ် ရည်ရွယ်ချက်များ ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်စဥ် အကောင်အထည်ဖော်သမျှ လူမှုစီးပွားရေးရာ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အောက်ပါ ရည်မှန်းချက် နယ်ပယ် (၃) ခုကို ရေရှည်တွင် ထိရောက်စွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်စေရမည် _
(၁) မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး၏ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော လူနေမှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေရေး။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီ၍ ခွင့်တူညီမျှသော ကောင်းမွန်သည့်ပညာရေး ကိုရရှိစေပြီး စဥ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရေး။
(၃) ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အကြောင်းတရားများကို ဆောလျင်စွာ တားဆီးနိုင်ရေး။
The Grand Opening Ceremony of Elite Petrochemical's LPG Terminal
Elite Petrochemical Co., Ltd was listed on Myanmar Private Company List for 2019 Tax Assessment Year
We are very proud to be recognized as the 90th...